Iyo nyowani vhezheni yeGodot 3.1, yakavhurwa sosi yemitambo injini, inosvika | Linux Vakapindwa muropa
Godot ndeye multiplatform 2D uye 3D vhidhiyo mutambo injini, open source yakaburitswa pasi peMIT License uye yakagadziriswa nharaunda yeGodot.
Injini inoshanda paWindows, OS X, Linux neBSD, inobvumidzawo kuburitswa kwemitambo yemavhidhiyo yakagadzirwa kubva paWindows, OS X neLinux, nharembozha (Android, iOS), uye HTML5.
Mavhidhiyo emavhidhiyo munaGodot akanyorwa muC # programming mutauro, kana mumutauro weGDScript.
GDScript, iri yemhando yepamusoro chirongwa chemutauro, yakafanana zvikuru nePython iyo yakagadzirirwa zvakanyanya kuna Godot, saka inowedzera mashandiro uye kugadzirisa. Asi zvinogona kunge zvisina kukodzera kumashandisirwo ese:
Code Autocompletion haina kugara ichiita
Kurambidzwa kunogumira nemuturikiri
Hairegi zvikanganiso zvese mukuumbwa (kana kunyora)
Iyo kodhi haina kuverenga zvishoma uye yakaoma kuisazve.
Godot ane epamberi, yakazvimirira, uye yakazara 2D injini, hapana chikonzero chekunyepedzera 2D mu 3D nzvimbo.
Injini inokwira inosanganisira mwenje, mimvuri, mimvuri, maGI, maprites, matiles, parallax kupuruzira, mapolgoni, mifananidzo, fizikisi, zvidimbu uye nezvimwe. Izvo zvakare zvinokwanisika kusanganisa 2D ne 3D kana 3D ine 2D uchishandisa iyo yekuona nzvimbo node.
Manot ine yakasarudzika uye imwe yeakanakisa masisitimu ehupenyu, ine rutsigiro rwe kugadzirisa, skeleton kuchangamuka, kusanganisa, mifananidzo yemifananidzo, morphing, realtime cutscenes, kudana mabasa uye kungoisa hupenyu chero chinhu chinotumirwa nechero node.
Godot zvakare ine injini yayo yefizikisi yeese 2D ne3D, ine kurovera kwekubonderana, muviri wakaomarara, muviri wakamira, mavara, mota, raycasts, mharadzano, uye zvimwe zvakawanda.
1 Main nyowani maficha eGodot 3.1
1.1 Mota nyowani
1.2 GDScript inowedzera
1.3 Zvimwe zvitsva
Main nyowani maficha eGodot 3.1
Shanduro nyowani yeakavhurika sosi mutambo injini Godot yakaburitswa nguva pfupi yadarika iyo yasvika vhezheni 3.1, mairi Iyi vhezheni nyowani ine inonakidza nhevedzano yeshanduko, kugadzirisa uye kuwedzera.
Neichi chitsva kuburitswa kwaGodot 3.1, izvi akagamuchira itsva OpenGL ES 2.0 injini yekupa.
Nepo iyo yekuvandudza kune vhezheni 3.0 yakatsiva iyo OpenGL ES 2.0 inopa injini mu 2.X bazi reinjini ine OpenGL 3.3 / OpenGL ES 3.0 inopa injini.
Zvisinei, timu yaifanirwa kudzoka pasarudzo iyi uye kugadzirisa zvakare injini yeOpenGL ES 2.0 yekuchengetedza mashandiro akanaka pama Mobiles ekare, wedzera mapuratifomu uye tarisa zvikanganiso zvakawanda pane nharembozha.
Nekudaro, nepo iyi injini nyowani yekupa yakakwana ye2D, 3D kuona kwave kurerutswa.
Semuenzaniso, iyo nzvimbo yemuvara iri mune sRGB (uye kwete nzvimbo yakatwasuka senge OpenGL ES 3.0 injini yekupa).
PBR-based rendering haina kutsigirwa. Mamwe mabasa emumvuri haashande (kutadza nekuda kweshanduro dzekare dzeOpenGL).
Izvozvowo ndezvechokwadi kune mamwe epashure-ekurapa mhedzisiro. Kujekesa kwepasi rose hakuzoshande, hapana GPU inobata zvidimbu.
Kunyangwe mune ramangwana zvichitarisirwa kuti pachave neiyo nyowani Vulkan injini yekupa, iyo ichaita iyo OpenGL ES 3.0 kupa injini kusashanda. Basa racho rinofanira kutarisa ku 3D kududzira. Mukupedzisa kwebasa Godot 4.0 ichabuda, mugore zvakajairwa.
Kune rumwe rutivi GDScript yakagamuchira kumwe kuvandudzwa, sekutaipa ingori chinhu chemufundisi uye kuchabvumidza Godot kutumira mameseji ekunyevera kumushandisi ayo netariro ichavandudza mirawo-yakanangana nemirairo yekuwedzera mashandiro.
Zvakare, vhezheni 3.2 yakarongerwa kwemwedzi mishoma inotevera. Iyo yekupedzisira inofanirwa kupa: mirairo yakanyorwa mune zvinyorwa, rutsigiro rweiyo FBX .
Zviripachena, vhezheni 3.1 ine zvigamba zvekuvandudza kugadzikana uye kugadzirisa miniti yekupedzisira bugs.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani vhezheni yeGodot 3.1, yakavhurika sosi yemitambo injini, inosvika